दुई नं. प्रदेशमा कुन कुन नेताले कहाँ कहाँबाट गरे मतदान ? – Nepal Journal
दुई नं. प्रदेशमा कुन कुन नेताले कहाँ कहाँबाट गरे मतदान ?
Posted By: Nepal Journal September 18, 2017 | २ आश्विन २०७४, सोमबार १४:१२
काठमाडौं । तेस्रो चरणको निर्वाचनमा दुई नं. प्रदेशमा मतदाता रहेका विभिन्न दलका नेताहरुले पनि आ–आफ्ना मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका छन् । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले रौतहटको गौर नगरपालिका दुईस्थित जुद्ध मावि केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले सिरहा नगरपालिका पन्ध्र स्थित सुखसैना केन्द्रबाट मतदान गर्दैछिन् । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीको धनुषाको नगराइन नगरपालिका दुईको राजेश्वर उमावि केन्द्रबाट मत खसाल्दै छन् । कांग्रेस नेता तथा श्रम मन्त्री फरमुल्ला मन्सुरले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका सात स्थित जितपुर उमाविबाट मतदान गर्दैछन् ।
पूर्व राष्टपति डाक्टर रामवरण यादवले भने मतदान नगर्ने भएका छन् । धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका चार सपहीका मतदाता रहेका उनले काम विशेषले मतदान गर्न नसक्ने बताएका हुन । उनी पहिलो संबिधान सभामा धनुषा पाँचवाट निर्वाचित भएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका नेता एवं स्वाथ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका तीन गौरीडाँडा मतदान केन्द्रबाट मत खसाल्दैछन् । माओवादी केन्द्रका नेता एवं सहकारी विकासमन्त्री प्रभु शाहले रौतहटको मौलापुर नगरपालिका पाँचको मौतापुर केन्द्रबाट मत खसाल्ने बताइएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले धनुषाको सबैला नगरपालिका दुई स्थित रामप्रसाद उमावि केन्द्रबाट मतदान गर्दै बताइएको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सर्लाही बलरा नगरपालिकाबाट मतदान गर्ने कार्यक्रम छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले सर्लाहीको चन्द्रनगर नगरपालिका दुई जनता उमावि केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता अनिल झाले रौतहटको दुर्भाभगवती गाउँपालिकास्थित केन्द्र संस्कृत उमाविवाट मतदान गर्नेछन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीका अर्का नेता महेन्द्रराय यादवले सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका नौ स्थिति रामजानकी मन्द्रिर मतदान केन्द्रबाट भोट खसाल्दै छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता शरतिसंह भण्डरीले महोत्तरीको औरही नगरपालिका, औरही माविबाट मतदान गर्नेछन् ।
Be the first to comment on "दुई नं. प्रदेशमा कुन कुन नेताले कहाँ कहाँबाट गरे मतदान ?"
‘भो बिद्यादेबीलाई नफेर ! खर्च जोगाऊ’ (7,991)